Soo Kordhinta Suuqgeynta | Martech Zone
Soo Kordhinta Suuq-geynta Gudaha
Khamiis, Juun 5, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Dadkuna Pamorama shaqo aad u xun ku qabtay tan infographic taasi waxay siisaa aragti ku saabsan sababta suuq geynta u tahay istaraatiijiyadda ugufiican ee ka soo horjeedka suuq geynta banaanka… aragtida macaamilka.
Maaddaama macaamiisha ay sii wadaan inay ku sii qulqulaan internetka, warshadaha suuqgeynta internetka ayaa sii socda. Habka laba-geesoodka ah sida internetka, moodellada dhaqameed ee suuqgeynta ayaa lumaya waxtarkooda, noocyada cusub ee suuqgeyntu waxay helayaan uumi iyadoo la siinayo qiimo macaamiisha si sii kordheysa u dhigaya xeeladaha suuq geynta.
In kasta oo dadaallada soo-socdaa ay u baahan yihiin ballanqaad iyo waqti si loo dhiso xawaare, ma jiraan wax kharash badan oo wax ku ool ah oo lagu helo macaamiil waaweyn oo iibsada alaabtaada ama adeeggaaga.
Tags: marketing inboundMacluumaadka Suuqgeyntasuuq geyn dibedda ahaan la furin
Gaaritaanka Ardayda Kulliyadda?
Kobaca Adeegga Macaamiisha Bulshada
Jul 5, 2012 markay tahay 8:28 PM
Kani waa faahfaahin weyn. Gebi ahaanba waan kugu raacsanahay markaad sidaa tidhi
macluumaadka ay si fudud u heli karaan macaamiisha hadda waxay sameyn karaan dibedda
suuqgeynta ayaa ku socota hoos u dhac joogto ah. Soo Galid
suuqgeynta ayaa laga yaabaa inay u xun tahay qaar, laakiin dhab ahaantii waxay awood siineysaa macaamiisha.